Sida loogu sheego gacalisadaada in aadan ku faraxsanayn tayada galmada | Raganimo University
Sida loogu sheego gacalisadaada in aadan ku faraxsanayn tayada galmada
February 9, 20193 minutes
Lamaaneyaal badan ayaa ku nool farxad la'aan taasoo ay sababtay tayada galmada oo hooseysa. Waxaa laga yaabaa in ninku uusan ku qanacsanayn galmada ama gabadhu aysan ku qanacsanayn shaqada xaga sariirta ee ninkeeda. Balse lamaanayaasha inta badan kama wada-hadlaan arintaan, oo waa la iska indho-tiraa, taasoo ugu dambeyn keeni karta burburka reerka.
Kala hadal baahideeda iyo taada
Adiga oo aan wax dhaliil ah soo jeedin waxaad isku daydaa in aad gabadha la yeelato sheeko macaan oo degan. Waxaa laga yaabaa in sida adigu aadan galmada ugu qanacsanayn in aysan iyaduna ugu qanacsanayn. Waxaa laga yaabaa in ay iyada lafteedu doonayso in ay si joogto ah galmada u sameyso balse ay xishooneyso ama ay jirto xaalad kale. Waxaa laga yaabaa in ay dooneyso in ay tijaabiso qaabab cusub oo galmada ah iyo dhinacyo kala duwan balse aysan lahayn kalsoonida.
Waxaad isku daydaa in aad sidii adiga oo shukaansi ku jira in aad gabadha kala hadasho arimahaan. Oo aad si raaxo leh u muujiso in aad laftaadu baahi u qabto iyada, oo aad dooneyso in aad waqti badan sariirta kula qaadato. In aad diyaar u tahay in aad waxyaabo cusub tijaabiso. Waxay u badantahay haddii sheekadu idin macaanaato in galmaduna idiin macaanaan doonto.
Haddii aad leedihiin caruur ama gabadhu ay shaqayso waxaa laga yaabaa in aysan waqti u helin galmada. Oo habeenkii ay daalantahay. Waxaa loo baahanyahay in aad fahantu xaaladeeda. Waxaad samayn kartaa in aad xitaa galmada ku aadiso waqtiga ay firaaqada leedahay xitaa haddii ay tahay maalintii. Gabadha ayaa laga yaabaa sidoo kale in ay xanuunsantahay xitaa hadduu uusan ahayn mid muuqda. Isku day in aad si qoto dheer oo naxariis leh u fahanto xaaladeeda isla markaana aad raadiso xal idin wada anfacaya.
Xasuusi in aad jeceshahay iyada oo aad baahi u qabto jirkeeda. In aad ku raaxaysato galmada. Dumarku waa jecelyihiin in ay dareemaan in baahi loo qabo.
Joogtada wax ka badal
Lamaanayaal badan ayaa tayadooda galmada hoos u dhacdaa maadaama ay ku celceliyaan hal qaab oo galmada ah. Waxaa laga yaabaa in ninku uu u bartay hal dhinac oo marka uu biyo-baxo uu horay ka dhaco. Waxaa laga yaabaa in gabadha lafteedu in ay ku caajistay arinta joogtada ah.
Galmadu waxay xiiso ku leedahay marka la tijaabiyo waxyaabo cusub, lagu sameeyo goob cusub, lala yimaado firkado cusub. Isku day in aad gabadha magaalada u kaxayso. In aad soo wada baashaashaan. In aad caruurta inta qof uga tagtaan aad goob cusub tagtaan. Safar wada gala. Xitaa hotel wada seexda oo halkaa ku soo raaxaysta.
Marka sariirta la joogto tijaabiya waxyaabaha cusub. Haddii aydan horey u tijaabin ku soo dara galmada afka. In gabadhu ay kuu dhuuqto, adiguna aad u leefto. In aad qaabab galmo iyo dhinacyo cusub tijaabisaan. In aad xirataan dhar cusub oo soo jiidasho leh marka sariirta la joogo. Isbedalku waa u fiicanyahay galmada oo xiiso ayuu u yeelaa.